Sarms AC-262356 Powder: သင်သိလိုအားလုံး | AASraw SARMS
Sarms AC-262356 Powder: သင်သိလိုအားလုံး
/ဘ‌‌လော့ခ်/AC-262356/Sarms AC-262356 Powder: သင်သိလိုအားလုံး
အပေါ် Posted 04 / 27 / 2018 by 阿斯劳 ရေးသားခဲ့သည် AC-262356.
1.What SARMs အမှုန့်ဖြစ်ပါသလား
2.How SARMs လုပ်ငန်းခွင် (နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကစတီရွိုက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်)
3 ။ SARMs Powder ကိုယူဖို့အတွက်ဘယ်အချိန်မှာ?
4.AC-262356 အမှုန့် Sarm ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Action- AC-6 အမှုန့်၏ 262356.Mechanism
AC-9 မှုန့် 262356.Benefits
AC-10 မှုန့် 262356.Risk
11.AC-262356 အမှုန့် Reddit-CAS: 870888-46-3
AC-12 အမှုန့်ကိုဝယ်ရန် 262356.Where?
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-AC-13 အမှုန့်၏ 262356.Certificate
I.Raw AC-262356 အမှုန့်အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: AC-262356 အမှုန့်
အရောင်: Off-အဖြူ Crystalline Powder မှအဖြူ
1 ။ SARMs အမှုန့်အဘယ်အရာဖြစ်ပါသလား
SARMs အမှုန့် testosterone ဟော်မုန်း၏တူညီသော stimulatory သက်ရောက်မှုရှိဖို့ရည်ရွယ်သည်ဟုဒြပ်မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။ SARMs အမှုန့်ကိုတခါတရံဓါတ်ဖြည့်စွက်မှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြာခဏဆိုသလို "သုတေသနမှသာ" ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ကြောင့်သူတို့ဥပဒေရေးရာပါဝင်ပစ္စည်းများမဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖို့ "ဥပဒေရေးရာ steroids" အဖြစ်အင်တာနက်ဆိုဒ်များတွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။ ဘယ်တော့လဲ SARMs အမှုန့်ယူပြီး တစ်ဦးဖြည့်စွက်ကြောင့်သူတို့ကို၏အချိန်ကိုက်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိရန်အရေးကြီးပါတယ်။ SARMs အမှုန့်ကိုယူသောအခါကြှနျုပျတို့ကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်ဘယ်ကြောင့်ဤသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လျော်သောအချိန်ကိုက်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
SARMs အမှုန့်အဘို့ရေတိုသည် "ရွေးချယ်ပြီးအန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကို။ " ဒီဒြပ်မူးယစ်ဆေးခန္ဓာကိုယ်ကသဘာဝ testosterone ဟော်မုန်းသို့မဟုတ် testosterone ဟော်မုန်းတိုးမြှင်ဖြည့်စွက်ကျင့်သောတူညီသောလမ်းကိုထိခိုက်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, SARMs အမှုန့်နည်းပညာပိုင်းဥပဒေရေးရာမရှိကြပေ။ အဲဒီမှာစတီရွိုက်အပေါ်ပြုမိအလုံအလောက်သုတေသနခဲ့မရှိသေးပေနှင့်တာဝန်သိကွာမရသောအခါသူတို့အများအပြားအနုတ်လက္ခဏာကျန်းမာရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ SARMs အမှုန့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တာဝန်သိအသုံးပြုသောအခါ, သို့သော်သူတို့မကြာခဏကာယဗလအတှကျအသုံးပွုနှင့်စျေးကွက်နေကြတယ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားအတွက်အသုံးပြုမှုကနေပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
SARMs အမှုန့်ကြွက်သားအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုအဖြစ်ခြုံငုံအစွမ်းသတ္တိကိုအဆင့်ဆင့်ရှိသည်ဖို့သက်သေပြလျက်ရှိသည်။ SARMs အများကြီးနည်းပါးလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသို့သော် Pro ကို-ဟော်မုန်းများနှင့်ဟိုအန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်, အပြင်ကဤရလဒ်များကိုပေး။ ကဖြိုဖျက်ရန်, SARMs အမှုန့်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်သျှူးအတွင်းသော့ခ receptors လှုံ့ဆော်ပေးသောလုပ်ကွက်သို့မဟုတ်ဒြပ်ပေါင်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာမလိုလားအပ်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလျော့ကျလာချိန်တွင်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်၏ဒြပ်ပေါင်းရဲ့အချက်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားနေသည်။
2 ။ ဘယ်လို SARMs အလုပ် (နှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကစတီရွိုက်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်နိုင်သည်)
သင့်ရဲ့ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ရန်စတီရွိုက်သုံးပြီး sledgehammer အတူ microchip tweaks ဖို့ကြိုးစားနေကဲ့သို့ဖြစ်၏။ steroids သင်သည်ကြွက်သားတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဆီဥကိုမီးရှို့လျက်, ထို့နောက်သင့်ဆဲလ်အတွင်းရှိပရိုတိန်းပေါင်းစပ်တိုးပွါးသော testosterone ဟော်မုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ကြွက်သားတည်ဆောက်ကူညီပေးသည်။ ဒါကစတီရွိုက်၏ဟိုဘက်စဉ်းစား, ထိုသို့အကြီးဖွင့်ပါ။
သို့သော် steroids လည်းသင့်ရဲ့အသည်း, သင့်ဆီးကျိတ်, သင့်နှလုံး, သင့်လိင်အင်္ဂါ (ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက် clitoral ပျတိုးအတွက်ဘောလုံးကိုကျုံ့စေပါတယ်ရာ), နှင့်သင့်အလယ်တန်းလိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ (အသံသည်တိမ်အနက်, ခန္ဓာကိုယ်ဆံပင်ကြီးထွားမှု, လူကို Boob, ဝက်ခြံနှင့်အတူအပြန်အလှန် စတာတွေ) ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး steroids ၏အန်ဒရိုဂျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
1: steroids အတူပြဿနာကိုသူတို့ 1 တစ်ခုဟို-to-အန်ဒရိုဂျင်အချိုးရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကသူတို့ကြွက်သားတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းအဖြစ်သင့်ဘောလုံးကျုံ့သို့မဟုတ်သင့်အစေ့ကိုကျယ်စေဆိုမှနည်းတူများပါတယ်ဆိုလိုသည် - သင်ကဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့သတိထားကြီးကြပ်မှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဟော်မုန်းပမာဏကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ bioidentical testosterone ဟော်မုန်းယူပြီးဖွင့်မဟုတ်လျှင် (ငါသည်ဤလုပ်နေခဲ့ကြရတယ် နှစ်ပေါင်းနဲ့ကျွန်မ။ သင်ဒီနေရာမှာ testosterone ဟော်မုန်း hacking အကြောင်းကိုဖတ်နိုင်) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခဲ့ဖူးပါဘူး။
SARMs တီထွင်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။3နှင့် 1 သကဲ့သို့မြင့်မားသွား: 90 သူတို့ဟာ 1 မှာစတင်ဟို-to-အန်ဒရိုဂျင်အချိုးဝါကြွားခြင်း, steroids ထက် ပို. ရွေးချယ်ပါတယ်။ ဒါကသင်ဆဲကြွက်သားတိုးတက်မှုနှင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုရနိုင်ဆိုလိုတယ်, ဒါပေမယ့် SARMs သငျသညျလူကို Boob ပေးဒါမှမဟုတ်မုတ်ဆိတ်မွေးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သို့သငျသညျကိုဖွင့်မရပါလိမ့်မယ်။ သင်တို့သည်လည်းနှုတ် SARMs ယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုးဆေးအဘို့အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ပါဘူး။
SARMs "သာသုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်။ " အဖြစ်ကြာမြင့်စွာသင်သည်ထိုသူတို့မဝယ်အဖြစ်ကိုလည်းဥပဒေရေးရာများမှာကိုသင် SARMs လက်လီရောင်းချသူများ "သာဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက်" ကဲ့သို့အကြောင်းသတိပြုစရာများပါဝင်သည်သတိထားမိခြင်းနှင့်မယ် "လူ့စားသုံးမှုများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ " သူတို့ကဒါအမှုဥပဒေများပြောင်းလဲမှုအတွက်ဤသို့ပြု သူတို့ကအစိုးရနှင့်အတူဒုက္ခမရကြဘူး။
လက်တွေ့ (လူ့) စမ်းသပ်မှုတွေသို့မဟုတ် Pre-လက်တွေ့ (တိရိစ္ဆာန်) စမ်းသပ်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်တစ်ဒါဇင် SARMs အကြောင်းကိုရှိပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်လူကြိုက်အများဆုံးမြား၏အကောင်းအဆိုး cons ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ တနည်းကား, ဒီအနည်းငယ်ပိုထွက်အဲဒီမှာငါဆွေးနွေးရန်အတွက် biohacking အများစုထက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာရှေ့ဆက်မည်။
စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူ, ရဲ့စာရင်းကိုပေါ်ပထမဦးဆုံး SARM အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့: AC-262356 အမှုန့် (CAS: 870888-46-3) ။
များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများရှိပါတယ် SARMs အမှုန့်။ သင်ကာယဗလရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုတရှာတွေ့နိုင်အောင်သင့်လျော်သောသုတေသနကဤ steroids မဆိုဝယ်ယူနိုင်မတိုင်မီအမှုကိုပြုရပါမည်။ SARMs အမှုန့်ဤအမျိုးအစားပါဝင်သည်:
AC-262356 အမှုန့် CAS: 870888-46-3
က S-40503 CAS: 404920-28-1
က S-23 CAS: 1010396-29-8
အားလုံးဖြည့်စွက်အတူကြောင့်သည့်အခါနှင့်မည်သို့ SARMs အမှုန့်ကိုယူခြင်းငှါသိရန်အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်သံသရာအတွက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့်တာဝန်သိယူခံရဖို့လိုအပ်ကြောင့် steroids နည်းနည်းလှည်နိုင်ပါတယ်။ သင်အသုံးပြုလိုသောအရာ SARMs အမှုန့်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီပြီးတာနဲ့သင်ကိုလိုက်နာလိုသည့်သံသရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တစ်နေ့တာအတွင်းကသင်၏ SARMs အမှုန့်ကိုယူတဲ့အခါအတိအကျအချိန်ကိုက်အရေးမပါဘူးနေစဉ်, သင်တစ်ဦးချင်းစီနေ့၌ယူထားတဲ့သူတွေကိုသိသောကိစ္စပါပဲ။ ကျော်လုပ်မထားပါနဲ့။
အားလုံးစတီရွိုက်နှင့်ဝသကဲ့သို့, SARMs အမှုန့်သာ၏လူကြီးများသို့မဟုတ်အသက် 21 နှစ်ကျော်နေဖြင့်ယူရပါမည်။
ထည့်မျှသာ 262356 မှာပိုက်လိုင်းအတွင်းပိုမိုအားကောင်း SARMs အမှုန့်တစ်ခုဖြစ်တယ် / 870888rds.but ကြောင့်ရှားပါးင်နှင့်: Next ကိုကျနော်တို့ (46-3-2 CAS) sarm အမှုန့်-AC-3 အမှုန့်ထဲမှာလူကြိုက်များမှုန့်မိတ်ဆက်ပေးဦးမည် (အတော်လေးအားနည်းနေ + ရှားပါး) ရလဒ်အဖြစ်နေဆဲသိရှိနိုင်ပေမည်။ ဤကဲ့သို့သောပစ္စည်းပစ္စယပုရေဒါအောက်မှာလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပျံ။ Plus အားငါမည်သူမဆိုထိုသို့အပြုသဘောဆောင်စမ်းသပ်ရန်, မကတစ်သွေးသို့မဟုတ်ဆီးစမ်းသပ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖော်ပြမည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုမြင်ကြပြီမဟုတ်။ ငါသည်ဤ SARM အမှုန့်နေဆဲသိရှိနိုင်ကြောင်းပြောနေမျှမျှတတယုံကြည်မှုပါပဲ။ ထိုအခါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမယ် testosterone ဟော်မုန်းထက်အားနည်းတစ်ခုခုချင်ပါဘူးစဉ်မဆိုတရားဝင် (မူးယစ်စမ်းသပ်ပြီး) အားကစားသမားဒီပစ္စည်းပစ္စယကနေသာရှိပြီးအစွန်းရလိမ့်မယ်, ရဲ့ရိုးသားကြစေ။
4 ။ AC-262356 အမှုန့် Sarm ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
AC-262356 အမှုန့် testosterone ဟော်မုန်းအဖြစ်အကြမ်းဖျင်း 66% ကဲ့သို့ခိုင်မာသောဟိုသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ကာ androgen.This ဝင်းသိသိသာသာ၏အလေးချိန်မထိခိုက်ပါဘူးဆိုလိုတယ်အဖြစ်အကြောင်းကို 27% ၏အာနိသင်ရှိကြောင်း Acadia ဆေးဝါးကတီထွင်ထားတဲ့နှုတ်တက်ကြွ nonsteroidal SARM ဖြစ်ပါသည် ဆီးကျိတ်နဲ့ဟောပြောမှုတွေတွေ့နေကျမဟုတ်သော။
castrated အထီးကြွက်အပေါ်တစ်ဦးနှစ်ဦးကိုတပတ်လေ့လာမှု levator ani တိုးတက်မှုနှုန်းဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်, ဒီဒြပ်ပေါင်းများကြွက်သားထုထည်တိုးပွါးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့်မြင့်မားသော LH အဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့လေ၏။ ဓာတ်လှေကား LH အဆင့်ဆင့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းအတွက်လိင်ဟော်မုန်းတစ်ခုအချိုးမညီမျှမှုအတွက်ညံ့ဖျင်း functioning ဝှေးစေ့ညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။
5 ။ AC-262356 Powder
အမည် AC-262356 အမှုန့်
အံ Mass 278.348 g / mol
နာမ် AC-262356 အမှုန့် AC-262356 အမှုန့် CHEMBL468938, SCHEMBL4879629
Organoleptic ကိုယ်ရေးဖိုင် Fine အဖြူ poweder, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Form ကိုအစိုင်အခဲ
အစီရင်ခံစာများ COA, HPLC
ကြိုတင်သာသနာကိုကြှနျတျောတို့၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပေးပါ။
AC-262356 အမှုန့် (CAS: 870888-46-3) တစ်ဦးရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကိုအဖြစ်ပြုမူသောဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ chemically က endo ပုံစံတက်ကြွစွာပုံစံဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ endo-Exo isomerism ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
6 ။ Action- AC-262356 အမှုန့်၏ယန္တရား
-4- (3-hydroxy-8-aza-bicyclo [3.2.1] octyl) -naphthalene-1-carbonitrile (AC-262356 အမှုန့်) 5nM တစ်ကီနှင့်အတူအန်ဒရိုဂျင် receptor များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist နှင့်အဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာဆှဖှေဲ့အဖြစ်ပြုမူ စမ်းသပ်ပြီးအခြားမည်သည့် receptors ။
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများပေးဆက်ကြသူများကသာတစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်အဖြစ်က၎င်း၏အာနိသင်၏ 66% ပတ်လည် testosterone ဟော်မုန်း၏ဟိုလုပ်ဆောင်ချက်န်းကျင် 27% ၏အကျယ်ချဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
-AC-262356 အမှုန့်မျှထိုကဲ့သို့သောအဖွင်အီစထိုဂျင် Steroid တစ်မျိုး receptors ကဲ့သို့သောအခြား receptors မှ binding glucocorticoid ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းပြ MR mineraloid နှင့်အဓိကချို့ယွင်း PR စနစ်။
7 ။ AC-262356 Powder အသုံးပြုမှု
AC-262356 အမှုန့်တစ်ဦးရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကိုအဖြစ်ပြုမူသောဒြပ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ chemically က endo ပုံစံတက်ကြွစွာပုံစံဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ endo-Exo isomerism ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
သောကြောင့်လက်ရှိ testosterone ဟော်မုန်းကုထုံးများ၏ကန့်သတ်ခြင်းနှင့် liabilities ၏, Non-တီးရွိုက်တစ်ရှူး-ရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor modulator တွေကိုကုထုံးအတွက်ဆေးခန်းအဓိပ္ပါယ်ရှိသောကြိုတင်မဲပေးစေနိုင်သည်။ တစ်ဦးအလုပ်လုပ်တဲ့ဆဲလ်-based assay အသုံးပြုခြင်း AC-262356 အမှုန့်သဘာဝအန်ဒရိုဂျင် testosterone ဟော်မုန်းမှဆွေမျိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း agonist လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူတစ်အစွမ်းထက်နှင့်ရွေးချယ် AR ligand အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ castrated အထီးကြွက်များတွင်တစ်ဦးက 2-ရက်သတ္တပတ်နာတာရှည်လေ့လာမှု AC-262356 အမှုန့်သိသိသာသာအထူးသဖြင့် levator ani ၏တိုးတက်မှုလှုံ့ဆော်ဖို့နှင့်မြင့်မားသော LH အဆင့်ဆင့်ကိုနှိမ်နှင်းရာတွင်ဤတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဟို parameters များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းညွှန်ပြ။ testosterone ဟော်မုန်းမှချွန်ထက်မတူဘဲ, ကိုယ်ပျောက် (AC-262356 အမှုန့်) ဆီးကျိတ်နဲ့ဟောပြောမှုတွေတွေ့နေကျမဟုတ်သောအလေးဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, အားနည်းအန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် AC-262356 အမှုန့်အကျိုးရှိသောဟိုသက်ရောက်မှုနှင့်အတူရွေးချယ်အန်ဒရိုဂျင် receptor Module (SARMs) ၏ဝတ္ထုလူတန်းစားကိုကိုယ်စားပြုသည်။
AC-262356 အမှုန့်မျှသာ2/3မှာ testosterone ဟော်မုန်း၏ဟိုအာနိသင်ဟာရောင်စဉ်အတွက်အားကောင်း SARMs ၏တဦးတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး ... ဒါပေမယ့်ရှားပါးင်နှင့်ရလဒ်အဖြစ် (အတော်လေးအားနည်းနေ + ရှားပါး) ၏တစ်ခုဖြစ်သည်နေဆဲသိရှိနိုင်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့မည်သူမဆိုထိုသို့အပြုသဘောဆောင်စမ်းသပ်ရန်မြင်ကြရ, မကတစ်သွေးသို့မဟုတ်ဆီးစမ်းသပ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဖော်ပြမည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုကြပြီမဟုတ်။ ငါတို့သည်ဤ SARM နေဆဲသိရှိနိုင်ကြောင်းပြောနေမျှမျှတတယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ ထိုအခါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကာယဗလမယ် testosterone ဟော်မုန်းထက်အားနည်းတစ်ခုခုချင်ပါဘူးစဉ်မဆိုတရားဝင် (မူးယစ်စမ်းသပ်ပြီး) အားကစားသမားဒီ AC-262356 အမှုန့်ထဲကတွင်ရှိသောအစွန်းရလိမ့်မယ်, ရဲ့ရိုးသားကြစေ။
ပေမဲ့ AC-262356 အမှုန့် ၎င်း၏အစစ်အမှန်အစှမျးသတ်တိကြောင့်အနီး-သုညအန်ဒရိုဂျင်လှုပ်ရှားမှုပေးဆိုတဲ့အချက်ကို, မုသာလူကြိုက်အများဆုံး SARMs ထက်ပိုမိုပျော့စဉ်းစားသည်။ ဒါဟာနေဆဲကြွက်သားကြီးထွားမှုနှင့်အစွမ်းသတ္တိ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးတွင်ရှိသောအစွန်းရရှိလိုသူအမျိုးသမီးမှသုညအန္တရာယ်များကိုဖြစ်စေဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုဆံပင်ကိုရိတ်, မလိုချင်တဲ့ဆံပင်ကြီးထွားမှု, အသံနက်ရှိုင်းအဖြစ်ရှုံးသောအခါအထီးဝိသေသလက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုမလိုချင်ကြဘူး
ယခုတိုငျအောငျ, အမျိုးသမီးအားကစားသမားမှရရှိနိုင်သောအလွန်နည်းပါးရွေးချယ်စရာတွေထဲက Anavar ခဲ့ - ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ကိုယ်ပိုင်စာရင်းတို့နှင့်အတူကြွရာလူကြိုက်များပျော့ Steroid တစ်မျိုး။
8 ။ AC-262356 Powder သောက်သုံးသော
မှတ်ချက်: သောက်သုံးသောသတင်းအချက်အလက်သာသိပ္ပံနည်းကျရည်ညွှန်းရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏။ SARMs ဗဟိုတစ်ထိန်းချုပ်ထားသိပ္ပံနည်းကျပတ်ဝန်းကျင်ပြင်ပကဒီဥစ္စာများ၏လူ့စားသုံးမှုသို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုလွှတ်ပေးခြင်းမထားဘူး။
အထွေထွေလမ်းညွှန်အဖြစ်ကျနော်တို့အကြောင်းကို 10-15 မှာအသစ်တခု SARM '' စမ်းသပ် '' တစ်ရက်ကို mg နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်ပြုပြီးဘယ်လိုကြည့်ရှုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ သင်သည်မည်သည့်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ရလဒ်များကိုတွေ့ကြုံခံစားဘူးဆိုရငျသငျသညျတဖြည်းဖြည်းတစ်နေ့လျှင် 10mg အားဖြင့်သောက်သုံးသောတိုးပွားလာစတင်နိုင်ပါသည်။
9 ။ AC-262356 Powder ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် AC-262356 အမှုန့်များ၏အထင်ရှားဆုံးအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြွက်သားကြီးထွားမြှင့်တင်ရန်ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာရေး SARM ဤအမျိုးအစားနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြွက် testosterone ဟော်မုန်း၏နိဒါန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 66% သလောက်တစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာကြွက်သားကြီးထွားကြုံတွေ့ကြောင်းပြသပါ။
သည်အခြား AC-262536 အမှုန့်အကျိုးခံစားခွင့်များပါဝင်သည်:
(အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါစတင်ခြင်းချွတ်ထမ်းဘိုးတို့ကိုနိုင်ရသော) ကို hippocampus ၏ function ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးခြင်း
နှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေကာကွယ်တားဆီးရေး။ စမ်းသပ်မှုများဒေတာဒီ SARM လူ့ဆီးကျိတ်ကင်ဆာဆဲလ်ထဲမှာ dihydroxytestosterone (DHT) ၏လှုပ်ရှားမှုဖိနှိပ်နိုငျကွောငျးကိုဖျောပွ။
သိပ္ပံပညာရှင်များလည်းထွက်ရှာတွေ့ AC-262356 အမှုန့်ရဲ့ဆိုးကျိုးများ ဆီးကျိတ်ရဲ့စံပြအရွယ်အစားစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက် 14x testosterone ဟော်မုန်း၏ထက်အားနည်းခဲ့ကြသည်။
10 ။ AC-262356 Powder ၏အန္တရာယ်
ရပ်ဆိုင်း testosterone ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှု
11 ။ AC-262536 Reddit-CAS: 870888-46-3
12 ။ AC-262356 Powder Buy ရန်အဘယ်မှာရှိသနည်း
13 ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-AC-262356 အမှုန့်၏လက်မှတ်
14 ။ ဗိုလ်လုပွဲအတှေး
AASraw ထောက်ပံ့ရေးအရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်မြင့်မားသောသန့်ရှင်းစင်ကြယ် sarms အမှုန့် အများအပြား bodybuildinger တိုက်ရိုက် AASraw ထံမှ sarms အမှုန့်ရ, သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒီလိုလုပျနိုငျသညျ။
သူတို့ဒါကြောင့်အသစ်ကနေသောကြောင့်, sarm အမှုန့်ငါသည်ဤဘလော့ဂ်ပေါ်မှာအကြောင်းပြောဆိုသည့်ပစ္စည်းပစ္စယအများစုထက်ပိုစွန့်စားမှုသယ်။ ဤသည်အနည်းငယ်ပိုထွက်အဲဒီမှာ Bulletproof အစားအသောက်စားခြင်းသို့မဟုတ်သင့်အိပ်ပျော်ခြင်း hacking ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ , သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ရဲ့တရားစီရငျခကျြကိုသုံးနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှနားထောင်ပါ။
သငျသညျ sarms အမှုန့်ကြိုးစားခဲ့ဖူးသလား သငျသညျကိုစတင်သွားမည်နည်း ဒါကြောင့် အကယ်. အောက်ကမှတ်ချက်တွေအတွက်ကောင်းမကောင်း shared လျှင်, အကြီးအဖြစ်ချင်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်များနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုဖတ်ပါ AASraw.
YK11 Powder Buy: ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ & အကျိုးကျေးဇူးများ & ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
အွန်လိုင်း LGD-4033 အမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါခြေလှမ်းလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်
အသုံးအများဆုံး SARM: ခိုင်မာတဲ့စျေးနှုန်းအပေါ် SARM ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်မှာရှိသနည်း
3723 Views စာ
စမတ်မူးယစ်ဆေး IDRA-21 အမှုန့်အကျိုးခံစားခွင့်	Ostarine MK-5 အမှုန့်အသုံးပြုခြင်း၏ထိပ်တန်း 2866 အကျိုးကျေးဇူးများ